आज जोर्डन संग भिड्दै नेपाल, के जित्ला त जोर्डनलाई ? कोच यसो भन्छन् । हेर्नुस् खेल ईतिहास । – List Khabar
Home / खेलकुद / आज जोर्डन संग भिड्दै नेपाल, के जित्ला त जोर्डनलाई ? कोच यसो भन्छन् । हेर्नुस् खेल ईतिहास ।
admin June 7, 2021 खेलकुद Leaveacomment 187 Views
आज दोस्रो दिन पनि ह्वात्तै घट्यो सुनको मुल्य , बजारमा सुन किन्नेको घुइँचो !
आज नेपालले फिफा विश्वकप २०२२ कतार तथा एएफसी एसियन कप २०२३ को संयुक्त छनोटअन्तर्गत जोर्डन बिरुद्धको खेल खेल्दै छ । नेपालले समूह ‘बी’ अन्तर्गत जोर्डन बिरुद्ध कुवेत सिटीमा राति पौने दश बजे खेल्नेछ । खेलमा जित हात पारे मात्र नेपाल एसियन कप छनोटको तेस्रो चरणमा सिधैँ पुग्ने सम्भावना हुनेछ। त्यसैले आज हुने खेल नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण छ।
यसअघीको खेल – छनोटका अन्तिम ३ खेलका लागि कुवेत पुगेको नेपालले चाइनिज ताइपेमाथि २–० को जित निकालेको थियो । पहिलो लेगमा पनि सोही टोलीलाई २–० ले हराएकोले यसपटकको जितलाई पनि ठूलो सफलताभन्दा पनि सफलताकै निरन्तरताका रुपमा हेरिएको छ । अब बाँकी खेलमा भने नेपाली टोलीको वास्तविक परिक्षा हुनेछ । ६ अंक जोडेर समूहको चौथो स्थानमा रहेको नेपालका लागि आठ समूहका उत्कृष्ट चार टिम बन्न जोर्डनसँग जित निकाल्नु पर्ने भएको हो।
चाइनिज ताइपेलाई हराउनु अघि इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेल ६–२ ले गुमएपछि समर्थकले नेपाली टोलीको प्रदर्शनको प्रसंशा गरेका थिए । नयाँ प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीको रणनीतिलाई धेरैले तारिफ गरेका छन् । खासमा अलमुताइरीको रणनीतिको परिक्षा पनि जोर्डनसँगको खेलबाटै हुनेछ । नेपाल र जोर्डनबीच सोमबार नेपाली समय अनुसार राती ९:४५ बजे खेल सुरु हुनेछ ।
नेपालका प्रशिक्षक के भन्छन् ? जोर्डनविरुद्धको खेलअघि नेपालका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले जोर्डनविरुद्ध सन्तुलित खेल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘फुटबलमा नतिजाले मात्र अर्थ राख्छ, हामी जोर्डनविरुद्ध सन्तुलित ढंगबाट खेल्नेछौं। हामी हार मान्नेवाला छैनौं, खासगरी नेपालको प्रशासनिक निकायसँगै खेलाडी र प्रशंसकहरूको मानसिकतामा परिवर्तन भएको छ,’ कुवेती नागरिक अलमुताइरीले खेलअघि भनेका छन्। सबै खेल ०-० बाट सुरु हन्छ र नतिजा मैदानमा देखाएको प्रदर्शनको आधारमा तय हुन्छ। हामी लक्ष्य जित्ने हो। एसियन कपमा छनोट हुनका लागि हामीलाई जित्न जरुरी छ। हामीले ताइपेईविरुद्धको खेल जस्तै जोर्डनविरुद्धको खेलका लागि पनि तयारी गरेका छौं।’
जोर्डनका प्रशिक्षक के भन्छन् ? यस्तै खेलअघि जोर्डनका प्रशिक्षक भाइटल बोर्केलमन्सले नेपालविरुद्ध जितका लागि खेल्ने बताएका छन्। ‘हामीलाई छनोट हुनका लागि ९ अंक चाहिन्छ। अंक जोड्ने यात्रा हामी नेपालविरुद्धको खेलबाट सुरु गर्न चाहान्छौं। पहिला हामी नेपालविरुद्ध तीन अंकका लागि खेल्नेछौं। त्यसपछि मात्र अर्को खेलमा ध्यान दिनेछौं,’ उनले एएफसीसँग कुरा गर्दै भनेका छन्।सन् २०२१ मा जोर्डनले ८ मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको छ। जसमा तीन खेलमा जित हात पारेको जोर्डन तीन खेलमा पराजित भएको छ। दुई खेलमा भने जोर्डन बराबरीमा रोकिएको छ।
नेपाललाई जित्नै पर्ने आवस्यकता – समूह ‘एच’ मा रहेको उत्तर कोरियाले छनोटबाट नाम फिर्ता लिएका कारण कोरिया समूहको पाँचौ स्थानमा धकेलिएको छ । त्यसैले एएफसीले पाँचौ स्थानको टिमविरुद्ध हात पारेको जितलाई उत्कृष्ट चौथो टिम घोषणा गर्दा समावेश नगर्ने निर्णय गरेको थियो। जसको घाटा नेपाललाई भएको छ। किनभने नेपालले हात पारेका दुवै जित समूहको पाँचौ स्थानको चाइनिज ताइपेईविरुद्ध हो।
जोर्डनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण – नेपाललाई जस्तै जोर्डनलाई पनि सोमबारको खेल महत्वपूर्ण छ। समूहमा कम्तिमा दोस्रो बनेर विश्वकप छनोटको तेस्रो चरण र एसियन कपमा सिधैं स्थान बनाउनका लागि जोर्डन सोमबार नेपाललाई पराजित गर्न चाहन्छ। अघिल्लो खेलमा दोस्रो स्थानको कुवेतलाई अस्ट्रेलियाले पराजित गरेको फाइदा उठाउँदै जोर्डन दोस्रो स्थानमा बलियो हुने रणनीतिमा छ। जोर्डन फिफा वरीयतामा ९५औं स्थानमा छ। आफूभन्दा ७६ स्थान तलको नेपालविरुद्ध जित हात पार्दा जोर्डनको उत्कृष्ट दोस्रो टिम बन्ने सम्भावना प्रवल हुनेछ।
यसअघि नेपाल र जोर्डनको खेल – गत मे ३१ मा भियतनामसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा १-१ को बराबरी खेलेको जोर्डन २४ मेमा युएईसँग ५-१ गोलले पराजित भएको थियो। नेपाल र जोर्डनबीच अहिलेसम्म तीन खेल भएको छ। जसमा नेपालले दुई हार बेहोर्दा एक बराबरी खेलेको छ। ती तीनै खेल विश्वकप छनोटका खेल हुन्। सन् २०११ मा भएको विश्वकप छनोटको पहिलो लेगमा जोर्डनले घरेलु मैदानमा नेपाललाई ९-० गोलले पराजित गरेको थियो।
यो जित जोर्डनको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सबैभन्दा ठूलो जित हो। एक सातापछि दशरथ रंगशालामा भएको दोस्रो लेगमा नेपालले जोर्डनलाई १-१ गोलको बराबरीमा रोकेको थियो। पछिल्लो पटक जोर्डन र नेपालबीच जारी विश्वकप छनोटमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। आम्बानमा सो खेलमा नेपालमाथि जोर्डनले ३-० को जित हात पार्‍यो। तीन खेलमा जोर्डनले १३ गोल गर्दा नेपालले केवल १ गोल गर्न सकेको छ।
जोर्डनको सामना गर्न लागेको नेपाली टोलीको वास्तविक परिक्षा आज हुनेछ । त्यसपछि जेठ २८ गते अष्ट्रेलियाको सामना गर्नेछ । ती दुई खेलपछि वास्तवमा नेपाली टोलीमा आएको भनिएको परिवर्तन खासमा महसुस गर्न सकिन्छ । अब यस पटकको दोस्रो लेगमा कस्तो नतिजा निस्कन्छ समर्थकका लागि चासोको विषय हुनेछ ।
नेपाल र जोर्डनको हेड टु हेड – २३ जुलाई २०११ – हार ० –९ – विश्वकप छनोट, २८ जुलाई २०११ – बराबरी १ –१ (भरत खवास) विश्व कप छनोट, १५ अक्टुबर २०१९- हार ० –३ विश्व कप छनोट
Previous कुलमान घिसिङ र रबि लामिछाने लाई चुनाव लड्न आग्रह !
Next रवि लामिछाने भन्नुहुन्छ : आइपरे यु’द्ध त ल’ड्न सकिन्छ, राजनीति त के हो र ! (भिडियो सहित)
काठमाडौँ : फिफा विश्वकप २०२२ तथा एसियन कप २०२३ को छनोट अन्तर्गत समूह चरणको छैटौं …